Mihanaka ny zava-mahadomelina: Roa lahy mpanao trafikana héroïne nidoboka am-ponja | NewsMada
Mahazo vahana tato ho ato ny fihanaky ny zava-mahadomelina eto amin’ny firenena. Porofon’izany ny nahatraran’ny polisy, ireto roa lahy mpanao trafikana héroïne, teny amin’ny faritra 67 ha, afakomaly. Naiditra am-ponja avy hatrany, omaly izy ireo, taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny fampanoavana.
Voasambotry ny polisy miady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina (Stup) Anosy, afakomaly teny amin’ny faritra 67 ha tokony ho tamin’ny 1 ora tolakandro ireto voarohirohy ireto. Loharanom-baovao no nahafahan’ny polisy nanenjika ireto mpanao trafikana zava-mahadomelina ireto. Nohamafisin’ny polisy fa tafiditra hatrany amin’ny fanenjehana ataon’ny polisin’ny Stup amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina, izay mitarika fitondran-tena tsy mendrika eny anivon’ny fiarahamonina ny fisamborana ireto roa lahy ireto. Nahazo angom-baovao ny polisy fa hoe mihaodihaody any 67ha izy roa lahy miaraka amin’ireto zava-mahadomelina ireto. Niroso tamin’ny fametrahana ny vela-pandrika sy ny fanarahan-dia ny polisy ka tratra tany amin’izy ireo ny héroine milanja 1,23grama. Araka ny fantatra nandritra ny famotorana azy ireo fa 50 000Ar ny vidin’ny iray grama ka tsinjarain’izy ireo ho fito izany, amidiny 5 000Ar ny iray. Niaiky ny heloka vitany izy ireo.
Mirongatra ny zava-mahadomelina amin’izao…
Saika isan’andro andrenesana mpivarotra rongony tratran’ny polisy sy ny zandary. Vao afakomaly teny Androndrakely akaikin’ny sekoly iray eny an-toerana roa lahy tratran’ny polisy noho ny fivarotana rongony sy toaka. Fantatra fa mivarotra rongony amin’ny mpianatra ry zalahy ireto. Nosamborin’ny polisy ireto jiolahy ireto ary mbola nahatrarana rongony sy toaka gasy dimy litatra tany amin’izy ireo. Efa nampidirana am-ponja ihany koa izy ireo rehefa avy natolotra ny fampanoavana.
Vao haingana koa ny zandary no nandoro ireo rongony milanja efa ho roa taonina mahery tany amin’ny faritra Atsimo, ankoatra ireo efa nogotana teny an-tanimboly amina velaran-tany hekitara maro. Efa betsaka izay rongony tratra sy olona naiditra am-ponja izay fa toa miditra ny fonja izay tratra dia iny misy mipoitra indray. Ny fiparitahan’ireny zava-mahadomelina ireny anefa no isan’ny mampirongatra koa ny herisetra, eny tonga hatrany amin’ny fanolanana ankizy tsy ampy taona mihitsy aza izany. Sao tokony hanaovana hetsika manokana mihitsy ity ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina ity?